सोती घटना : भेरी नदीमा चौथो शव भेटियो | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
जेठ १४, २०७७ बुधबार १६:६:५६ | राजु लामिछाने
रुकुम पश्चिम - चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा गएको शनिवार बेलुका भएको घटनामा बेपत्ता भएका ६ जनामध्ये थप एक जनाको शव भेरीको किनारमा फेला परेको छ ।
भेरी नगरपालिका ४ का नवराज बिकको शव शनिबार राति नै भेरी नदी किनारमा भेटिएको थियो । आइतबार उहाँसँगै गएका चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १ का २० वर्षीय टिकाराम विकको शव घटनास्थलबाट झन्डै २५ किलोमिटर तल जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नं. १२ मा खोदा खोला नजिक भेटिएको थियो ।
रुकुम चाैरजहारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
सोमबार भेरी नगरपालिका वडा नंं. ४ का २१ वर्षीय गणेश बुढाको पनि शव भेटिएको थियो । उहाँको शव पनि टिकारामको शव भेटिएको स्थान नजिकै भेटिएको हो ।
उहाँको शव भेटिएपछि अब बेपत्ता हुनेको संख्या २ रहेको छ । भेरी नगरपालिका वडा नम्वर ११ का गोविन्द शाही, वडा नम्बर ४ का सन्दीप विक अझै बेपत्ता छन् । बेपत्ताको खोजी भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।